त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हड्तालमा, आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प - विवेचना
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हड्तालमा, आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प
July 13, 2018 228 Views
काठमाडौं, असार २९। जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै राजधानीमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल(टिचिङ अस्पताल) का आवासायी चिकित्सकहरू हड्तालमा उत्रिएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडीए)ले आज (शुक्रबार) देखि आकस्मिकबाहेक सबै उपचार सेवा ठप्प पारेको हो।
‘१३ दिनसम्म पनि अनशनप्रति सरकार मौन रहनुले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ’, नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कालोपट्टी बाँध्नेलगायतका विरोधका कार्यक्रमको सुनुवाइ नभएपछि कठोर कदम चाल्न बाध्य भएका छौं ।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. केसी १४ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत बसेका छन्। दिनप्रतिदिन उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको बताइएको छ। सरकारले बुधबार उनलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यो असफल भएको थियो।
Previous डुबेर तीनको मृत्यु
Next पारावारीमा चौतारी सहकारीको पहिलो शाखा
Pingback: business reputation management companies